कांग्रेस धादिङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ को सभापतिमा राकेश धमला निर्वाचित - Nari Batika
कांग्रेस धादिङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नं. २ को सभापतिमा राकेश धमला निर्वाचित
८ मंसिर २०७८, बुधबार ०७:१६ मा प्रकाशित ( १ हफ्ता अघि) २१ पाठक संख्या
नेपाली काँग्रेस धादिङको प्रतिनिधिसभा क्षेत्र न २ को सभापतिमा राकेश धमला निर्वाचित भएका छन् । मंगलबार धादिङबेशीको नीलकण्ठ मा.वि मा सम्पन्न भएको अधिवेशनमा धमलाले ६ सय ५६ मत ल्याएर प्रतिनिधि सभा क्षेत्र नं. २ को सभापतिमा निर्वाचित भएका हुन् । उक्त मतदानमा कुल एक हजार २ सय ८३ मतदाता रहेकोमा एक हजार दुई सय ७४ मत खसेको थियो ।